Fivoriambe sy fitsapana vokatra ho an'ny Die Casting - Minghe Casting
FIVORIANA SY FITSARANA
Ny fandrosoan'ny fivorian'ny Minghe
Minghe Die Casting dia manolotra vahaolana turnkey malefaka sy mahomby amin'ny famokarana sub-assemblement sy ny fivoriambe vonona amin'ny famokarana.
Izahay ao amin'ny MINGHE CASTING dia manana fitaovana sy fahaizana manao karazana fivoriana sy fitiliana maro. Ny fivoriamben'ny vokatra dia azo antoka mba hitazonana ny fari-pahaizana avo lenta avo indrindra ary koa ny fihodinam-potoana mahomby amin'ny alàlan'ny tsipika fivoriambe ho an'ny be dia be.
Manomboka amin'ny fivorian'ny mekanika tsotra sy fanandramana tsindry, hatramin'ny fivorian'ny herinaratra sy ny fanandramana miaraka amin'ny mpandinika tambajotra. Io dia hahafahanao mividy vokatra vita fa tsy singa fotsiny.
Fitaovana fanandramana elektronika dia ampiasaina hamoronana fambara fanentanana sy hisamborana ny valiny avy amin'ny fitaovana elektronika. Ny fiasan'ny fitaovana elektronika dia azo hamarinina na tsy misy kilema ao amin'ilay fitaovana, izay azo zahana sy amboarina. Ny fampiasana fitaovana fitsapana elektronika dia ilaina amin'ny karazana asa amin'ny rafitra elektronika.
Ny fiezahana sy ny ezaka ho an'ny fivoriambe mety kokoa
Na mila fampidirana fitaovana tsotra na fivoriana mekanika sarotra ianao, ny Minghe Die Casting dia afaka manome serivisy fitehirizana fotoana sy mahomby ho an'ny tetikasanao. Izahay dia mitantana ny tetikasanao feno avy amin'ny prototyping, casting casting, milina, fividianana stock, ary fivoriambe. Azonay atao koa ny manome ny kitapom-batsy miangona ho an'ny tsipika famokarana sy ny fitaovana fanamboarana. Manomboka amin'ny fivorian'ny masinina madinidinika mankany amin'ny vala elektro-mekanika sarotra dia ampifanarahanay amin'ny vahaolana araka ny filanao marina.
1. Ny firafitry ny casting casting
Miaraka amin'ny fampiharana malalaka ny teknolojia famolavolana cnc, ny fahasarotan'ny firafitry ny casting casting dia mitombo hatrany. Amin'ny fikarakarana ny famoahana maty sasany dia sarotra be ny mametraka sy ny mametaka azy ireo ary tsy mety amin'ny fametrahana sy fametahana marobe izy ireo. Ny teknolojia famolavolana indray mandeha ny famolavolana ankapobeny dia ny manodina sy mamadika ny latabatra azo arakaraky ny zoro amin'ny fitaovana milina fanodinana marindrano na marindrano-marindrano hanodinana ny tarehy sy ny lavaka rehetra amin'ny fizarana maty indray mandeha, ary avy eo mahafeno ny fepetra fandeferana geometrika rehetra amin'ny sary. Ny ampahany mifandraika amin'ny tohana fizotra dia misy sosona sy fikosoham-boto mba hanasarahana ny fikirakiran'ny fizotrana amin'ny sangan'asa.
2. Fitsipika fanodinana
Araraoty tsara ny tombony fanodinana multi-zoro sy omni-direction an'ny ivon-toeran'ny milina CNC, ampiasao ny toetra mampiavaka ny fikosoham-bary fanodinana karbida hanodinana ireo faritra misy fatra ambany amin'ny hafainganam-pandeha sy fahana kely, ampiasao ny ampahany sisa amin'ny mombamomba azy ny fikirakirana sy ny fikirakirana fikirakirana fikirakirana, ary ampiasao ny rindrambaiko UG hamoahana ho azy ny asan'ny programa dia miantoka ny tsy fitovizan'ny ampahany voahodina sy ny firaisan-kina tsara amin'ny lafiny rehetra.
3. Vokatry ny fampiharana
Ny ampahany manaparitaka ny maty dia mampiasa milina tsy miova sy teknolojia mandrafitra indray mandeha. Rehefa novokarina be ny ampahany maty, rehefa vita ny fizahana telo, dia toy izao ny antontan'isa momba ny endrika sy ny toerana: K flatness plate base base 0.012mm, M flatness flatness plate ≤ 0.01mm, M backside parallel Ny ambaratonga ≤0.015mm, ny perpendicularity φ30mm mankany amin'ny foton'ny M dia ≤0.013mm, ny perpendicularity φ32mm mankany amin'ny fototr'i K dia -0.015mm, ny elanelan'ny φ30mm ary ny axis-the32mm dia -0.014mm. Amin'ny famokarana betsaka, ny endrika sy ny toeran'ny toerana misy azy dia miorina, ary ny fahombiazan'ny famokarana dia mihatsara.
4. Fampiharana sy fanitarana
Ny teknolojia fanodinana indray mandeha ny famolavolana ampahany amin'ny singa dia azo ampiasaina tsy amin'ny ivon-toeran'ny milina marindrano ihany, fa ao amin'ny foibe fanodinana marindrano sy marindrano. Ny ampahany manaparitaka ny maty dia azo zahana ary atsangana amin'ny dingana iray amin'ny ivon-toeran'ny milina famaky dimy, ary azo ahodina amin'ny sosona ny tahony; ny ampahany maty manary dia azo zahana amin'ny lovia mivadika amin'ny ivon-toeran'ny famaky telo. Mba hanesorana ny sehatra sisa tavela.
5. Ny fampiharana ny milina ankapobeny
Ny teknolojia fanodinana indray mandeha ny famolavolana ampahany amin'ny ampahany dia ampiasaina indrindra amin'ny fanodinana ireo faritra misy ny fametrahana sarotra sy ny fametahana azy. Ny fomba fanodinana dia azo atambatra hanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy hiantohana ny maha-marina ny endrika sy ny toerana; dia azo ampiasaina amin'ny fanapahana tsiroaroa ny ampahany simetrika rafitra mba hampihenana ny isan'ny clamping, Mitsitsy tooling famokarana vidiny; mety amin'ny sosona haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha sy kely, ny herin'ny fanapahana dia kely, ny hafanana fanapahana dia kely mandritra ny fanodinana, ary ireo faritra maty dia tsy mora amin'ny fahasimban'ny fihenjanana. Ity fotokevitra fanodinana ity dia ampandrosoina tsikelikely any amin'ny orinasa famonoana maty.